रामचन्द्र पौडेल कसरी अर्बपति भए? – गोविन्दराज जोशी « Post Khabar
रामचन्द्र पौडेल कसरी अर्बपति भए? – गोविन्दराज जोशी
Published on: 26 July, 2020 7:40 pm
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल कसरी अर्बपति भए भनेर प्रश्न गरेका छन।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पेश गरेको स्पष्टीकरणमा “रामचन्द्र पौडेल दमौलीमा आउँदा झोला बिसाएर मोही, मकै र चिया खाने मेरो घर थियो । अहिले उनी अर्बपति भए । त्यसोभन्दा उनलाई होच्याएको भनी अपमान होला । यथार्थ कुरा त्यही हो” नेता जोशीले स्पष्टिकरणमा भनेका छन।
साथै उनले बरिष्ठ नेता पौडेल माथि चुनावको टिकट बेचेको आरोप समेत लगाएका छन। “राजनीतिको सबै मर्यादा तोडेर ७० को चुनावमा पनि तनहूँँको टिकट आफै वाड्छु भनी रामचन्द्र पौडेलले तनहूँँको क्षेत्र नं। १ को टिकट बिक्री गरेकै हुन्” नेता जोशीले स्पष्टिकरणमा उललेख गरेका छन।
नेता जोशीलाई २०७४ सालको चुनावमा तनहुँ-१ मा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरूद्ध उम्मेद्वारी दिएको र उम्मेद्वारी खारेजीपछि हराउन भूमिका खेलेको आरोपमा कांग्रेस अनुशासन समितिले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको हो।